Unoita Huru Muteveri Manhamba Anonyatsoverenga? | Martech Zone
China, Kurume 25, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Dai ndaigona kuwedzera vanyoreri zana kana zviuru gumi vanyoreri pamhepo, zvinogona kusazopa musiyano kune rangu repazasi mutsara. Ini ndoda kukwezva iyo rudyi vanyoresa kuti vatore bhizinesi kubva kwavari. Ndakatonyora kare kuti kushambadzira hakusi kwemaziso eziso, ndezve chinangwa.
Ndashandura pfungwa dzangu here? Kwete, kwete kana zvasvika pakushambadzira.
Ini handina basa nekuti vangani vateveri kana vanyoreri vauinazvo, ini ndine hanya nenhamba yevateveri kana vanyoreri vane zvakafanana zvido kana vangave vangangove vatengi kwandiri. Kana iwe ukapa kugona kushambadza kune yako network, ini ndichazviita kana iyo nhamba ye vateveri vanokodzera kana kunyorera rakakodzera bhizinesi rangu - kwete chete nekuti iwe une hombe network.
Iko kune mukana ku nhamba hombe, zvakadaro. Iko kusimudzira uye chiremera.
Pane kuwedzera muhuwandu. Yakaderera vateveri kuverenga kunokonzera yakaderera vateveri kutora. Unogona kuve neakanakisa blog, twitter account kana facebook peji mune zvese ... asi zvinorwadza kuwedzera vateveri kana iwe usina. Kana uine vateveri zana, zvinogona kutora mavhiki kana mwedzi kuti zvisvike kusvika ku100, kunyangwe nezvakanakisa zvemukati
ne 10,000 vateveri, zvakadaro, iwe unogona kukwanisa kuwedzera zana pazuva! Pane zvikonzero zviviri nei:
Nhamba hombe dzinosimbisa kuti uri chinhu chikuru. Ndinoziva izvozvo zvinoita sekuseka, asi ichokwadi. Vanhu vane husimbe… ivo vanotarisa pane yako Twitter peji, yako Facebook peji kana yako blog uye ivo vanoedza kutsvaga kuti yakakura sei chibvumirano iwe. Kana uine nhamba hombe, vanowanzo dzvanya bhatani rekutevera zviri nyore kwazvo. Ichokwadi chisina kunaka. Ndicho chikonzero nei ndichiratidzira akati wandei masheji emabheji mune yangu yepadivi.
Nhamba huru dzinokutendera iwe mukana wekusimudzira. Makore mazhinji apfuura, ndakaita bvunzo kwandakazivisa kuti blog yangu yakahwina mubairo seyakanakisa yekushambadzira blog paInternet. Ndakaita toni yekushambadzira kweguerilla uye ndikaikurudzira kwese kwese. Kuverenga kwangu blog kwakawedzera zvakanyanya semhedzisiro. Ini ndakazonyora chinyorwa nezvekuti ndakazviita sei.
Ndakaona mamwe mabloggi achizviita, futi. Kudzoka pawaigona kubhadharisa anoverenga aMugovera, ini ndakaona vashoma vane blogger vane mukurumbira vachitora mukana wakazara uye vachizviita. Mablog avo akakwira mudenga - zvaishamisa. Ndazeza kungo kubiridzira (kunze kwekunge zviri nyore kwazvo kuti ndaifanira kungodzidzisa vanhu chidzidzo chakazvigadzira).
Ndiri kukurudzira kubiridzira kana kutenga vateveri? Zviri kwauri. Ini handisi kuzokuudza kuti chinhu chakaipa kana chinhu chakanaka. Ndiri kungokuudza kuti zvinoita, zvechokwadi, zvinoshanda.
Ndiri kusimudzira parizvino yangu Twitter account ine Featured Vashandisi uye ndawedzera mazana mashoma vateveri vatsva. Iri ibasa rakanaka rinoenderana nemvumo, saka handisi kubiridzira kana kutenga vateveri - ndiri kungozvisimudzira. Chinangwa changu ndechekutora vanopfuura zviuru gumi vateveri nekukurumidza pane kupfuura gare gare.
Imwe katsamba pane Vakaratidzwa Vashandisi: Ini ndaisazobhadhara iyo hombe Tenga Kamwe package mune ramangwana. Kugamuchirwa kwangu kwakakwidza kumusoro mushandirapamwe uye kubva ipapo kwakadzikira - pamwe nekuti kumeso kwangu kuri kupihwa vanhu vamwechete nekudzokorora. Ndanga ndichigadzirisa nzvimbo yangu sezvo ivo vachinongedzera munzvimbo. Mune ramangwana, ndinofunga ini ndinongotenga chidiki diki cheshambadziro ndobva ndaita mishandirapamwe neyavo kunyoresa kwemwedzi.
Zviuru gumi vateveri inhamba yakanaka yekusimudzira. Sezvo ini ndiri kunyora bhuku rinenge riri kunze muna Nyamavhuvhu (Corporate Blogging for Dummies), ini ndoda kutora ese manhamba angu kumusoro - paFacebook, Twitter, uye vangu feed vanonyorera. Nenzira iyi network yangu yekusimudzira mukati yakakura uye ndinogona kubata vanhu vazhinji nayo.
Saka… ehe, ndinotenda kuti nhamba hombe dzinoverengwa!
Mar 26, 2010 pa 10: 58 AM
Inonakidza nzira, ndatenda nekuigovana.
Ini ndinobvumirana newe, nhamba hombe kuverenga, kunyangwe izvo zvisingaratidze mabhizinesi ari kuyerera kune yako saiti. Huwandu hukuru hunobatsira kubatisa vatungamiriri vanokodzera, sezvavanowana kufadzwa uye kukwezva nechaunga chavepo. Ipapo unofanirwa kutora matanho. Chaizvoizvo, sezano ndinokurudzira kuti utore mukana wezvinyorwa pane yako Facebook fan peji. Patsanura mafeni muzvinyorwa kuitira kuti iwe uzive vari vanogona kuve vatengi uye vasiri.
Kana iwe uine chero mibvunzo maererano neizvozvo, unogona kujoina ino saiti http://bit.ly/azEurc uye isa zvinokunetsa uye uwane mhinduro nekukurumidza kubva kune nyanzvi kunze uko.